सुशान्तको ‘भिसेरा रिपोर्ट’ आयो, यसरी भएको थियो मृ त्यु! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सुशान्तको ‘भिसेरा रिपोर्ट’ आयो, यसरी भएको थियो मृ त्यु!
सुशान्तको ‘भिसेरा रिपोर्ट’ आयो, यसरी भएको थियो मृ त्यु!
करिव १५ दिन अघि बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भयो। उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले । उनले घरमै पासो लगाएर आफ्नो ज्यान फालेपनि परिवारले भने मृत्यु रहस्यमय भन्दै अनुसन्धानको माग गरेको थिए ।
मुम्बई प्रहरीले घटना रहस्यमय भन्दै यस घटनालाई लिएर अझै पनि अनुसन्धन गरिरहेको छ । हालसम्म प्रहरीले सुशान्तका परिवारका व्यक्ति, कलाकार, नजिकका साथी रिया चक्रवर्ती लगायतसँग बयान लिइसकेको छ । सुशान्तको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आइसकेको छ ।
प्रहरी रिपोर्टमा पनि पासो लगाएको र श्वास रोकिएपछि उनको ज्यान गएको उल्लेख रहेको छ। रिपोर्टमा उनको शरीरमा कुनै किसिमको बाहिरी चोट नदेखिएको बताइएको छ । यस्तै सुशान्तका विसरा रिपोर्ट पनि आइसकेको छ ।
मृतकको शरीरमा केही न ।शालु पदार्थ वा केही रसायन छकी भन्ने पत्ता लगाउन शरीरको केही महत्त्वपूर्ण भित्री अंगको जाँच गर्नु विसरा परिक्षण हो । मुम्बाईस्थित जेजे अस्पतालमा गरिएको विसारा परिक्षणको रिपोर्ट १७ दिनपछि आएको हो । भिसेरा रिर्पोटमा उनमा कुनै पनि न ।शालु पदार्थ नभएको र पासो लागेर नै उनको मृत्यु भएको जेजे अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौं – ६ महिनादेखि फैलिएको को रोना भा इरसको म हामारीले अझै खराब अवस्था निम्त्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ ) ले चेतावनी दिएको छ ।
डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले म हामारी फैलिए पनि आर्थिक गतिविधि र जनजीवन समान्य बनाउने नाममा विभिन्न मुलुकहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि सही नीति अवलम्बन नगर्दा को रोना भा इरसबाट अझै धेरै मानिसहरु सं क्रमित हुने चे तावनी दिएका हुन् ।
म हामारी नि यन्त्रणका लागि अझै पनि परीक्षण, ट्रेसिङ्ग, आइसोलशन र क्वारेन्टिन नै उपयुक्त उपाय भएको उनको सुझाव छ ।
‘हामी सबै जीवन जिउन चाहन्छौँ । तर कठीन सत्य यो हो कि, म हामारी अन्त्य हुने सम्भावनाको नजिक पनि छैन,’ टेडरोजले सोमबारको ब्रिफिङमा भने ।
को रोना भा इरस पहिलोपटक गत वर्षको डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहानमा देखिएको थियो । त्यसयता विभिन्न मुलुकहरूले म हामारी फैलन नदिन लगाएको भ्रमण प्रतिबन्ध तथा ल कडाउन खुकुलो बनाउँदै सामान्य अवस्थाझैँ दैनिक गतिविधि अगाडि बढाउँदै लगेका छन् ।
ईयूले समेत जुलाई १ देखि विभिन्न १४ मुलुकलाई सुरक्षित देशको सूचिमा राख्दै यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।
कोरोना जितेको केहि दिन नपुग्दै अस्ताए पूर्वगृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँर !